Maxaa Keeno Qufaca? Sideena loo daaweeyaa?
Author Topic: Maxaa Keeno Qufaca? Sideena loo daaweeyaa? (Read 27789 times)
« on: March 20, 2016, 08:43:32 PM »
Qufaca waa falcelin alle ugu talagalay in lagu nadiifiyo marinnada hawada ee sambabka, taasoo looga soo saaro xabka, busta iyo waxyaabaha kale ee xasaasiyada keeno.
Qufaca badanaa waxaa loo kala qaybiyaa mid qallalan oo xaako ama candhuuf wadan iyo mid qoyan oo qofku wax tufayo, badanaa dhakhtarku wuxuu waydiiyaa qofka qufacayo nooca qufaciisa si loo kala sooco xanuunada keeno.
QUfaca qoyan badanaa waxuu astaan u yahay caabuq sambabka ah, xiiqda ama wadna xanuunka, qufaca qallalane wuxuu astaan badanaa u yahay xasaasiyadda, quumanka, hergabka iyo wixii la mid ah.
Qufaca qoyan wuu ka dhib badan yahay kan qallalan.
Waxaa kaloo qufaca loo kala qaybiyaa mid cusub oo soo booddo ah iyo mid muddo soo jiray, kan muddada soo jiray wuu ka dhib badan yahay kan kale, wuxuuna ka tarjumayaa inay jirto cillad raagtay sida tiibishada, xiiqda/neefta, sigaar cabista, laabjeexa iyo howlgabka wadnaha.
Sidee lagu ogaadaa qufaca halista ah?
Qufaca hadduu leeyahay dhiig ama neefsashadu ay ku dhibayso ama xanuun feeraha aad dareemayso waa in aad dhakhtar si degdeg ah ula xiriirtaa dhakhtar.
Waa maxay cudurrada keeno qufaca?
Cudurro badan ayaa keeni karo qufaca, laakiin waxaa ugu caansan kuwaan hoos ku xusan:
Xiiq / Neef: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,351.0.html
Qixdheer / Xiiq-dheer: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,1355.0.html
Hergab / Duray: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,6018.0.html
Howlgabka Wadnaha: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,520.0.html
Burunkiitada sigaar cabista: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,1408.0.html
Sidee loo daaweeyaa qufaca?
Waxaa jiro daawooyin badan oo loogu talagalay in qufaca loo qaato, laakiin way kala duwan yihin, qaar waxaa loogu talagalay qufaca xasaasiyadda ah, qaar waxaa loogu talagalay qufaca xabka soo saari la', fadlan inta aadan daawo farmashiga ka soo gadan dhakhtar la tasho, maxaayeelay waxaa jiro qufacyada qaar looma qaadan karo sharoobooyinka qufaca lagu joojiyo.
Qufaxa wax ma u dhibaa kilyaha?
Qofka markuu aad u qufaco muddo dheer waxaa xanuuno feeraha hoostooda meesha kilyaha ku aadan, waxayna soomaalidu dhahdaa, saan u qufacayay ayaa kilyaha i xanuunay, arrintaasi waxay ku dhacdaa in qufaca joogtada ah uu cadaadis saaro murqaha ka korreeyo kilyaha, waana meesha jilcan ee feeraha hoostooda ku beegan ee dhinacyada u dhaw.
Murqahaas oo u adkaysan waayay qufaca siyaadada ah ayaa waxaa keeno xanuun sidii in wax lagugu mudayo oo kale, wuxuuna qofka aaminaa inay kilyuhu yihiin.
Qufaca iyo kilyaha xiriir kama dhaxeeyo, waxyaabaha dhaawaca gaarsiiyo kilyaha kama mid ahan qufaca, sidaas awgeed qufaco saamayn kuma lahan caafimaadka kilyaha iyo shaqadoodaba.
Marmarka qaar xanuunku waa siyaado uusan qofka la qufaci karin dartiis.
Views: 33970 December 05, 2015, 01:19:38 PM
Views: 36235 April 06, 2016, 04:35:38 PM
Views: 14357 June 11, 2017, 12:22:58 PM
Views: 18594 March 10, 2012, 02:33:13 PM